चुस्न छोडौँ कमरेड ! अब श्रमजीवि पत्रकारका जीवन र जवानी | langtangnews.com
०४ असार २०७७, काठमाडौं
ओखलढुंगाको धुसेनीमा जन्मिएर प्राथमिक शिक्षा पुरा भए सँगै बुवाआमाले डोहोर्‍याउँदै २०४९ मा सिन्धुलीको दुधौली–१ झार्नुभयो । दाजुहरुको प्रेरणाले नबुझी–नजानी कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेको मलाई बाल्यकालदेखि नै राजनीतिको रस पसेको थियो । अरु सहपाठी भन्दा फरक सोच्ने मेरो बानीले स्कूले उमेरदेखि नै पढाईको अतिरिक्त अनेरास्ववियुमा क्रियाशील बनायो । भर्खरै शुरु भएको जनयुद्ध र रगतै तताउने क्रान्तिकारी साँस्कृतिक कार्यक्रमहरूले पनि मलाई तान्यो । समयको क्रमसँगै ऋषिराज देवकोटा ‘आजाद’ को रगतले सिञ्चित सिन्धुलीको माटोमा मेरो विद्यार्थीकाल र उर्वर युवावस्था आजादकै झण्डा उठाउन लागिरह्यो ।
दशक बढी बिताएको सामाजिक क्षेत्र छोडेर पच्चीस हजार लगानीमा गैर नाफामूलक मिडिया कम्पनीको व्यवस्थापक बन्ने प्रस्ताव आफैंमा सुन्दर थियो । त्यहि जोशमा स्थानीय दुई नेताको सहमति अनुसार मिडिया कम्पनी दर्ता गर्न र मिडियालाई आवश्यक पर्ने उपकरण किन्न मैले ढिला नै गरिन । आफ्नो अफिसमै एउटा बोर्ड झुन्ड्याउन मलाई कुनै महाभारत थिएन । पत्रकारिताको शुरुवाती समयमै स्थानीय निर्वाचनको चर्चा चल्यो । मिडिया खोल्न निकै जोडबल गर्ने कमरेडले टिकट नै पाएनन् । त्यो सँगै उनीहरूले तीन सय सदस्य बनाउन लिएको मौखिक ठेक्काको लिखित प्रमाण खोज्न थाले । फलतः मिडिया कम्पनीप्रतिको उनको मोह नै भंगभयो ।
समय बित्दै गए, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनको मिति तोकियो । मिडिया गठन गर्न उत्प्रेरित गर्ने दुबै नेताहरू फेरि सहयोगको याचना गर्दै कार्यालय आए । मान्छेको मन न हो, पग्लिने नै रहेछ । सामान्य सहयोग लिएर त्यो बेला पनि तिनै कमरेडको चुनावी अभियानमा खुलेर सहयोग गरियो । निर्वाचित भएसँगै २०० सदस्य बनाउने बाचा बिर्सिएर माननीय कमरेडले २ जनामै आफ्नो बाचा पूरा गरे । अर्का कमरेडले सय त होईन आफ्नो पच्चीस हजार खर्च गर्नुपनि उपयुक्त ठानेनन् । मलाई लाग्छ, चुनावी सफलता र समापनको खुशीयालीमा गरिएको कार्यक्रममा प्रायः साँझ झैँ, भट्टीको रक्सी र चुरोटको धुवाँसँगै उठाए म सँग गरेका सहकार्यका बाचाहरू ।
सिन्ह्वा न्युज एजेन्सीको समन्वय र चिनियाँ व्यापारीको सहयोगमा कोरोना संक्रमणको समयमा समेत फ्रन्ट लाईनमा काम गर्ने ३०० पत्रकारहरूलाई १ बट्टा मास्क र ६५ एमएलको स्यानेटाईजर वितरणको चाँजो मिलाए । संचारकर्मी साथीहरु धेरै र सामग्री थोरै भएकोले काभ्रे र भक्तपुर जिल्लामा आफैँ सहभागी भएर वितरण सहित अन्तरक्रिया गर्ने अवसर मिलाए ।
छलफलमा साथीहरुको कुरा सुन्दा लाग्थ्यो, मुलुकका सबै जनप्रतिनिधिहरु अर्कै ग्रहबाट झरेर आफ्नो जीवनकालभरी हामीलाई शासन गर्न आएका हुन् । यस्तो आक्रोश पोख्ने साथीहरू अरु कोहि नभएर तिनै नेतालाई कुर्सीमा पुर्‍याउने थिए । अधिकांश साथीहरूको आक्रोश, वेदना र बेचैनी यस्ता नेतालाई जिताउन लागेकोमा देखिन्थ्यो । आफैंले निर्वाचनमा जिताएका नेता कमरेडहरू सहयोग गर्नु त परको कुरा, भेटेर गफगाफ गर्न समेत तयार छैनन् । पत्रकारको फोन उठाउनु उनीहरुको कर्तव्य होईन । आक्ककल–झुक्कल उठाउने फोनमा प्राय एउटै जवाफ आउँथ्यो । अहिले म व्यस्त छु, केही दिनमा सम्पर्क गर्नुहोला । पटक–पटकको फोनपछि त्यो केहि दिन ३ वर्षसम्म नआएको अनुभव आफैंमा पिडादायी थियो ।
साथीहरूको भावनामा केहि मल्हम लगाउन सकिन्छ भनेर मैले लकडाउनको बीचमै केहि पालिका प्रमुख–उपप्रमुखलाई उहाँहरुकै कार्यकक्षमा गएर भेटे । छलफलमा मैले भने,“तपाईले विकास निर्माणको काम त राम्रो गर्नुभएको केहि साथीबाट सुनिन्छ तर व्यवस्थित प्रचार भएको त देखिएन नि ? आफूले गरेका कामहरूको प्रचारमा कत्तिको ध्यान पुर्‍याउनु भएको छ ? “प्रायः प्रमुख–उपप्रमुखको जवाफ हुन्थ्यो–पत्रकारहरु खाली माग्न मात्र आउँछन्, खान मात्र खोज्छन् । जाबो लेखेको र प्रचार गरेको पनि पैसा लाग्छ र ? म त फोन नै उठाउँदिन । उठाउनै परे र भेटें नै भनेपनि म त वास्तै गर्दिन ।
कमरेड, अहिले सत्ता र शक्तिमा हुँदै कम्तिमा आफूलाई सहयोग गरेका र गर्न सक्ने संचारकर्मी र संचारमाध्यमलाई संरक्षण गर्न ध्यान दिनुहोस् । करोड भन्दा माथिका परियोजनाहरुको बारेमा आम सरोकारवालालाई जानकारी दिन, कामको पारदर्शीता र खबरदारी गर्न स्थानीय मिडिया परिचालन गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिनुस् । त्यस्ता कामले परियोजना सम्पन्न गर्न, कामको प्रगतिबारे आम सरोकारवालालाई जानकारी दिन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । सायद ठूला परियोजना छनौट गर्दा यस्तो परिपाटी अवलम्बन गरिएको छैन । त्यसैले पालिकाहरूमा हुने विकास बजेटको कम्तिमा ०.५० प्रतिशत बजेट छुट्याएर स्थानीय संचार माध्यमलाई परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।